IsiZulu Books - Origins Publishers
Children’s books written in Isizulu
Izilwane zase pulazini – Farm animals unpacks the world of farm animals presented in a bilingual format, namely isiZulu to English. Language(s): isiZulu – English (bilingual)
Izilwane zase pulazini - Farm animals quantity
Ngelinye ilanga babuza ugogo wabo imibuzo eyishumi nesihlanu ngempilo yakhe. Uma ingxoxo iqhubeka uZazi noZiwelene bafunda ngokuthi uNelson Mandela ubeyisishoshovo esilwela inkululeko, enguMengameli futhi nomuntu owaphumelela ukuthola umklomelo weNoble Peace Prize lokho kwenza baqhubeke nabo nokwenza imisebenzi yakhe nanamhlanje. Language(s): isiZulu
Umkhulu uMandela quantity
Nangu uWanda, nezinwele zakhe ezinhle eziyisihluthu. Unesibindi namandla, kodwa akeneme ngenxa yokuhlala echukuluzwa ngabafana esikolweni. Ngenxa yezimfihlo zikaMakhulu zezinwele nezindaba zakhe, uyakuthokozela ukuthi izinwele zakhe zingumqhele nento angaqhosha ngayo. Language(s): isiZulu
Ubuhlalu BukaMpumi Obunomlingo
UMpumi nabagani bakhe bathola umlingo osezinweleni zakhe bese usuku lwesikole oluqala lungolujwayelekile eGoli. Ngokuphazima kweso luba olunakuhlabahlosile okwenzeka yonke indawo! Language(s): isiZulu
Ubuhlalu bukaMpumi obunomlingo quantity
Sonke kulo mndeni sibukeka sehlukile. UBaba mude mnyama. UMama unezinwele ezinsundu ezilula namehlo aluhlaza. Ezinye zezingane zinezinwele eziqondile, ezinye zinezinwele ezisongene. Abantu bababuka ngamanye amehlo, kwaze kwathi ngelinye ilanga, enye yezingane yaqunga isibindi yakhuluma ngeqholo ngokuthi uqoba lwayo ingubani emva kokuba isiyazi ngemvelaphi yayo nanokuthi kungani ibukeka yehlukile. Language(s): isiZulu